Baxhomekeke Kwizityholo zeeNkcazo kwiindaba ezazisenziwa nje
Wonke umntu ujwayele ukuva malunga nezobupolitika abancinci kunye nabathetheli abagwenxa bezoshishino, kodwa kukho into ebaluleke kakhulu xa iindwendwe zityhololwa ngokuziphatha kakubi. Ababhali beendaba, emva koko, bafanele ukuba bagcine isohlo elibalulekileyo kubantu abanegunya (cinga i-Watergate kaBob Woodward noCarl Bernstein). Ngoko xa i-Fourth Estate ihamba kakubi, ivelaphi na umsebenzi-kunye nelizwe? Iminyaka elishumi yokuqala yekhulu lama-21 yayingenanto yokungabikho kwamacandali anxulumene neendaba. Nantsi i-10 enkulu.
U-Jayson Blair kunye nokuThengiswa kunye nokuPhalala kwi-New York Times
UJayson Blair wayengowenkwenkwezi ehamba phambili e-New York Times de, ngowe-2003, iphepha lafumanisa ukuba lihlehlisiwe okanye lenze ulwazi malunga namanqaku amaninzi. Kwinqaku echaza iinkcukacha ezingalunganga zikaBlair, i-Times ibizwa ngokuba yi-scandal "ukukhwabanisa okukhulu kunye nethopho ephantsi kwimbali ye-152 yeminyaka yephephandaba." UBlair wafumana ibhola, kodwa akazange ahambe yedwa: Umhleli weGosa uHowwell Raines kunye nomhleli olawulayo uGerald M. Boyd, owayephakamisa uBlair ngaphakathi kwiphepha ngaphandle kwezilumkiso ezivela kwabanye abahleli, waphoxiswa ngaphandle.
Dan Kunoko, i-CBS News kunye neRekodi yeeNkonzo zeGeorge W. Bush
Kwiiveki nje ngaphambi koonyulo lukazwelonke luka-2004, i-CBS News yakha ingxelo malunga noMongameli uGeorge W. Bush uye wangena kwi-Texas Air National Guard - ngaloo ndlela wagwema i- Vietnam War draft - ngenxa yonyango olukhethekileyo ngumkhosi. Ingxelo yayisekelwe kwimemos kuthiwa yilelo xesha. Kodwa iiblogi zibonise ukuba iimemos zibonakala zifakwe kwikhompyutheni, kungekhona umshini wokubhala, kunye ne-CBS ekugqibeleni yavuma ukuba ayikwazanga ukubonisa ukuba iimem ziyinyani. Uphando lwangaphakathi lukhokelela ekuqhubheni i-CBS ezintathu kunye nomvelisi wengxelo, uMary Mapes. I-CBS News anchor Dan Kunoko, ngubani owakhusele i memos, wehla ngasekuqaleni kuka-2005, ngokusobala nje ngenxa yehlazo. Kunoko u-CBS wamangalela, esithi intanethi yayimnikezele kwibali.
CNN kunye neSoarcoated Coverage of Saddam Hussein
I-CNN iindaba eziyinhloko ze-Eason Jordan zavuma ngo-2003 ukuba iminyaka i-network ithengise ukukhutshwa kwamalungelo oluntu olutsha lukaSaddam Hussein ukugcina ukufikelela kumlawuli wecawa wase-Iraq. IJordanie ithe ingxelo yezobugebengu zakwaSaddam yayiya kuba neengxelo zeNCN ezisongela i-Iraq kwaye zithetha ukuvalwa kwe-network ye-Baghdad. Kodwa abagxeki bathi i-CNN ye-gloss kwi-Saddam yayiphumelele ngexesha elithile apho i-United States yayixubusha ukuba ingaya emfazweni ukuyisusa kumandla. NjengoFranklin Foer wabhala kwi-Wall Street Journal: "I-CNN yayingayishiya iBaghdad. Akunakuphela nje ukuba ayeke ukuyeka ukuxoxwa kwamanga, ayenokugxininisa ekufumaneni inyaniso ngoSaddam."
UJack Kelley kunye neendaba ezenziwe nge-Fabricated Stories e-USA Today
Ngo-2004, inkwenkwezi ye-USA Today umshicileli uJack Kelley wayeke emva kokuba abahleli befumene ukuba wayedala ulwazi kwiibali ngaphezulu kweminyaka elishumi. Ukusebenza kwisicatshulwa esingachazwanga, iphepha liqalise uphando olwalufumene izenzo zikaKelley. Uphando lwafumanisa ukuba i-USA Today ifumene izilumkiso ezininzi malunga nokubika kukaKelley, kodwa ukuba inkwenkwezi yakhe kwindlu yeendaba yayidumise imibuzo enzima ukuba ibuzwe. Nangona emva kokuba wayejongene nobungqina obunxamnye naye, uKelley waphika nantoni na. Kwaye njengoko kunjalo noBlair kunye neNew York Times, uhlazo lwaseKelley luthi imisebenzi yabahleli ababini abaphezulu be-USA namhlanje.
Abahlaziyi beMpi ababengabandakanyeli njengobe babonakala
Uphando lwe-New York Times olwenziwa ngo-2008 lwafumanisa ukuba iipolisi zasemkhosini ezishiye umhlala-phantsi ezazisetyenziswa ngokuqhelekileyo njengabahlalutyi kwiindaba ezipapashwayo zibonisa ukuba ziyinxalenye yemigudu yePentagon yokuvelisa ngokufanelekileyo ukusebenza kolawulo lwe-Bush ngexesha leMfazwe yase-Iraq. Ixesha lifumanise ukuba abaninzi abahlalutyi babenemikhankaso kubakontrakthi bezempi ababenomdla "kwimigaqo yemfazwe abacelwa ukuba bavavanye emoyeni," kubika uDavid Barstow. Ekuvukeni kwamabali kaBarstow, uMbutho weeNgcali zengxelo zeNational News wabiza i-NBC News ukuba unqume ubudlelwane bawo kunye negosa elithile - umhlala phantsi uGenry Barry McCaffrey - "ukuseka kwakhona ukuthembeka kwengxelo malunga nemicimbi enxulumene nempi, kuquka imfazwe e-Iraq. "
Ulawulo lwe-Bush kunye neColumnists kwi-Payroll yayo
Ingxelo ka-2005 ye-USA Today ibonise ukuba iNdlu ye-White White yayikhokhele abahleli bekhomphyutha abazinzileyo ukukhuthaza iinkqubo zolawulo. Amakhulu amawaka eedola ahlawulwa kubakhokho beArmsstrong Williams, uMaggie Gallagher, noMichael McManus. UWilliams, owamkela ininzi enkulu, wavuma ukuba wayefumene i-$ 241,000 yeeRandi ukuba abhale ngokufanelekileyo malunga neBush's No Child Left Behind, kwaye waxolisa. Ikholam yakhe yahluthwa yi-Tribune Co., umdibanisi wakhe.
I-New York Times, uJohn McCain kunye neLobbyist
Ngo-2008 I-New York Times yashicilela ibali elichaza ukuba umviwa we-GOP uSen. UJohn McCain wase-Arizona wayenebudlelwane obungalunganga kunye ne-lobbyist. Abagxeki bavakalisa ukuba ibali lalingenangqondo malunga nolwalamano oluchanekileyo kwaye lithembele kwiingcaphuno ezivela kumagama angaziwa nguMcCain. Amaxesha ombudsman u-Clark Hoyt wagxekisa ibali ngokukhawuleza kwiinyani, ukubhala: "Ukuba awukwazi ukubonelela ngabafundi ngobungqina obuzimeleyo, ndicinga ukuba akulungile ukubika iingcinga okanye ukuxhalabisa okungabonakaliyo malunga nokuba umphathi ufike ebhedeni elingalunganga . " U-lobbyist ogqithiselwe egalini, uVicki Iseman, wamangalela i-Times, ehlawula ukuba iphepha lidale ukucinga okungekho nto yokuba yena noMcCain babenomdla.
URick Bragg kunye neNgxabano kwi-Bylines
Ukutshisa kwizithende ze-Jayson Blair, eyaziwa ngokuba ngumlobi weNew York Times uRick Bragg wagunyaza ngo-2003 emva kokufumanisa ukuba ibali elithwele umgca walo kuphela liye labikwa ngumgca. UBragg wabhala ibali-malunga ne-ostermen yaseFlorida-kodwa wavuma ukuba uninzi lwentluli-ndlebe luyenziwe ngu-freelancer. UBragg wavikela ukusetyenziswa kwemigqomo ukubika amabali, isenzo esasithi sasidla ngo-Times. Kodwa abaninzi abaphengululi bacaphukiswa ngamazwi kaBragg kwaye bathi abayi kuphupha ukubeka umgca wabo kwibali ababengazibikanga.
ILos Angeles Times, uArnold Schwarzenegger kunye ne 'Gropegate'
Ngaphambi nje kokuba i-California yaseCalifornia ikhumbule ukhetho, iLos Angeles Times ibike izigxeko ukuba umgqatswa wegubernatorial kunye ne "Terminator" inkwenkwezi u-Arnold Schwarzenegger wayegubungele abafazi abathandathu phakathi kowe-1975 no-2000. Kodwa i-Times yavutha umlilo ngexesha elifanelekileyo, elibonakala lilungele ukuya kwiiveki. Yaye ngoxa ama-amane ama-6 atholwa ngamapolisa awazange athiwe, kwathiwa i-Times yayibhale ibali elibhekiselele kwi-Gov. UGrey Davis wayethetha ngamabhinqa aze ahlukumeze ngokwasemzimbeni kuba wayethembele kakhulu kwimithombo engaziwa. USchwarzenegger wayephikile ezinye zezigwebo kodwa wavuma ukuba "wayeziphathe kakubi" ngamanye amaxesha ekusebenzeni kwakhe.
UKarl Cameron, Fox News kunye noJohn Kerry
Iveki ngaphambi kokhetho lwango-2004, intatheli yezobupolisa beFox News uCar Cameron wabhala ibali kwiwebhusayithi ye-intanethi ebiza ukuba umviwa we-Democratic President uJohn Kerry wayenomntu oqhoshayo. Kwimbiko ye-air-air, uCameron wathi uKerry ufumene "umququzelelo wokuqala wokuxoxisana." Iindaba zeFox zamthukuthelela uCameron zaza zabuyisa ibali, zibiza ukuba yayiyizame eziqhwala. Abagxeki be-Liberal baxela ukuba i-gaffes ibungqina benkxaso yomnatha.
Iincwadi eziphezulu ze-Adobe Picture Books
I-Minot State University Admissions